Midnight Runners (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Midnight Runners 25 Aug 2017
Not Rated 2017 109 min Action, Comedy
Bae Yoo-ram, Byeon Woo-seok, Cho joon, Go Joon, Kang Ha-neul, Lee ho-jeong, Park Ha-sun, Park Seo-joon, Sung Dong-il
Midnight Runners ဟာ သွဂုတျလ9ရကျမှာရုံတငျခဲ့ပွီး ကိုရီးယား လူငယျမငျးသားတှဖွေဈတဲ့ Park Seo-joon, Kang Ha-neul တို့ အဓိက သရုပျဆောငျထားတဲ့ ဟာသ-အကျရှငျ အသားပေး ရုပျရှငျပါ။ ဒါရိုကျတာအဖွဈ Kim Joo-hwan က တာဝနျယူရိုကျကူးပါတယျ။
ရုပျရှငျမှာတော့ Park Seo-joon က Mr.Action စရိုကျက ပါဝငျထားပွီး ခပျသှကျသှကျနဲ့ သှေးဆူလှယျကာ ကိစ်စတခုဖွဈရငျ လုပျခငျြရာလုပျထညျ့လိုကျပွီးမှ စဉျးစားဆငျခွငျမှုကို နောကျမှလုပျသူဖွဈတယျ။ Kang Ha-neul ကတော့ Park Seo-joon နဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈပွီး ပုံစံခပျတုံးတုံးနဲ့ဖွဈကာ လကျတှလေု့ပျရမှာထကျ တှဝေစေဉျးစားနတေတျတဲ့ စာကွမျးပိုးလေး Mr.Bookworm အဖွဈ ပါဝငျထားပါတယျ။
သူတို့နှဈဦးက ကိုရီးယားရဲတက်ကသိုလျကို တကျရောကျကွမယျ့ ကြောငျးသားသဈတှပေါ။ ရဲတက်ကသိုလျမှာမှာ စတငျတှခေဲ့ကွပွီး အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးတှလေညျး မဟုတျကွဘူး။ ဒါပမေယျ့ လူပြိုတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ဖှနျကွောငျဖို့ကိစ်စ ဖွဈလာရာမှာတော့ ညီညှတျကွတဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈလာခဲ့တယျ။ ညနခေငျးတခုမှာတော့ အပွငျအတူထှကျရငျး ကလပျတကျကာ ကောငျမလေးတှပေိုးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ကွတယျ။ မိနျးမလှလေးတယောကျကို ဖှနျကွောငျဖို့ ကွိုးစားရငျးက မတျောတဆပဲ ပွနျပေးဆှဲခံရမှုကို မကျြမွငျကိုယျတှေ့ ရငျဆိုငျမိကွပါတော့တယျ။
Ki-Joon(Park Seo-joon) နဲ့ Hee-Yeol(Kang Ha-neul) တို့က သူတို့မွငျခဲ့ရတဲ့ မတရားမှုအတှကျ ရဲတိုငျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ကွပွီး ရဲတှဘေကျကတော့ စိတျမဝငျစားခဲ့ဘူး။ နောကျဆုံးမှာ ရဲတက်ကသိုလျမှာ တကျရောကျပညာသငျနတေဲ့ အရာရှိပေါကျစနှဈဦးက မိနျးမငယျလေးကို သူတို့ကိုယျတိုငျ ကယျတငျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပွီး ကိုယျတိုငျ စုံစမျးခွငျးတှေ လုပျဆောငျကွပါတော့တယျ။ အဖမျးခံမိနျးကလေးကို ကယျတငျနိုငျမလား? ဘယျလိုဒုက်ခတှေ တှကွေ့ဦးမယျဆိုတာကို ရယျရှငျစရာရောပွီး ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။
Midnight Runners ဟာ ဒီနှဈထဲမှာ နာမညျရလာတဲ့ မငျးသား Park Seo-joon အတှကျ ပထမအကွိမျ အဓိကဇာတျကောငျနရောက ပါဝငျခှငျ့ရတဲ့ ရုပျရှငျပါ။ တောငျကိုရီးယားအပွငျ ဟောငျကောငျ၊ ဂပြနျ၊ ထိုငျဝမျ၊ ဖိလဈပိုငျနဲ့ စင်ျကာပူတို့မှာ ပွသခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျဖွဈတယျ။ တောငျကိုရီးယာမှာ Midnight Runners ကို ရုံတငျတဲ့ ပထမအပတျမှာတငျ ပွညျတှငျးဝငျငှအေကောငျးဆုံး ရုပျရှငျစာရငျးရဲ့ ဒုတိယနရောကို ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ 2017 ခုနှဈရဲ့ ဝငျငှအေကောငျးဆုံး တောငျကိုရီးယားရုပျရှငျစာရငျးရဲ့ နံပါတျလေးနရောမှာ ရှိနတေဲ့ ရုပျရှငျပါ။
Park Seo-joon နဲ့ Kang Ha-neul တို့နှဈဦးဟာ ဒီနှဈပိုငျးမှာ နာမညျရလာတဲ့ ကိုရီးယားလူငယျမငျးသားတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးပါဝငျတဲ့ Midnight Runners ဟာ ကိုရီးယားပွညျတှငျးမှာတော့ အတျောကို စိတျဝငျစားခံခဲ့ရပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျထိ ရုပျရှငျအတှကျ လကျမှတျစောငျရေ 5.61 သနျး ရောငျးခထြားခဲ့ရပွီး ဝငျငှအေားဖွငျ့ ဒျေါလာ 39 သနျးထိ ရရှိခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျပါ။ နိုငျငံတကာဈေးကှကျ 12 ခုကိုလညျး ဝငျရောကျပွသခှငျ့ ရခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီလိုဇာတျကားလေးဖွဈတဲ့အတှကျ ယခုပဲ ကွညျ့လိုကျကွဖို့ အသိပေးလိုကျပါတယျ။
Reviews Credit- Motaku
Midnight Runners ဟာ သြဂုတ်လ9ရက်မှာရုံတင်ခဲ့ပြီး ကိုရီးယား လူငယ်မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Park Seo-joon, Kang Ha-neul တို့ အဓိက သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဟာသ-အက်ရှင် အသားပေး ရုပ်ရှင်ပါ။ ဒါရိုက်တာအဖြစ် Kim Joo-hwan က တာဝန်ယူရိုက်ကူးပါတယ်။
ရုပ်ရှင်မှာတော့ Park Seo-joon က Mr.Action စရိုက်က ပါဝင်ထားပြီး ခပ်သွက်သွက်နဲ့ သွေးဆူလွယ်ကာ ကိစ္စတခုဖြစ်ရင် လုပ်ချင်ရာလုပ်ထည့်လိုက်ပြီးမှ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကို နောက်မှလုပ်သူဖြစ်တယ်။ Kang Ha-neul ကတော့ Park Seo-joon နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး ပုံစံခပ်တုံးတုံးနဲ့ဖြစ်ကာ လက်တွေ့လုပ်ရမှာထက် တွေဝေစဉ်းစားနေတတ်တဲ့ စာကြမ်းပိုးလေး Mr.Bookworm အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးက ကိုရီးယားရဲတက္ကသိုလ်ကို တက်ရောက်ကြမယ့် ကျောင်းသားသစ်တွေပါ။ ရဲတက္ကသိုလ်မှာမှာ စတင်တွေ့ခဲ့ကြပြီး အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေလည်း မဟုတ်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် လူပျိုတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဖွန်ကြောင်ဖို့ကိစ္စ ဖြစ်လာရာမှာတော့ ညီညွတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ညနေခင်းတခုမှာတော့ အပြင်အတူထွက်ရင်း ကလပ်တက်ကာ ကောင်မလေးတွေပိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ မိန်းမလှလေးတယောက်ကို ဖွန်ကြောင်ဖို့ ကြိုးစားရင်းက မတော်တဆပဲ ပြန်ပေးဆွဲခံရမှုကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ရင်ဆိုင်မိကြပါတော့တယ်။
Ki-Joon(Park Seo-joon) နဲ့ Hee-Yeol(Kang Ha-neul) တို့က သူတို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ မတရားမှုအတွက် ရဲတိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပြီး ရဲတွေဘက်ကတော့ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ ရဲတက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက်ပညာသင်နေတဲ့ အရာရှိပေါက်စနှစ်ဦးက မိန်းမငယ်လေးကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ကယ်တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင် စုံစမ်းခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်ကြပါတော့တယ်။ အဖမ်းခံမိန်းကလေးကို ကယ်တင်နိုင်မလား? ဘယ်လိုဒုက္ခတွေ တွေ့ကြဦးမယ်ဆိုတာကို ရယ်ရွှင်စရာရောပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Midnight Runners ဟာ ဒီနှစ်ထဲမှာ နာမည်ရလာတဲ့ မင်းသား Park Seo-joon အတွက် ပထမအကြိမ် အဓိကဇာတ်ကောင်နေရာက ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ တောင်ကိုရီးယားအပြင် ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ စင်္ကာပူတို့မှာ ပြသခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်။ တောင်ကိုရီးယာမှာ Midnight Runners ကို ရုံတင်တဲ့ ပထမအပတ်မှာတင် ပြည်တွင်းဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်စာရင်းရဲ့ ဒုတိယနေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ 2017 ခုနှစ်ရဲ့ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်စာရင်းရဲ့ နံပါတ်လေးနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။
Park Seo-joon နဲ့ Kang Ha-neul တို့နှစ်ဦးဟာ ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ နာမည်ရလာတဲ့ ကိုရီးယားလူငယ်မင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးပါဝင်တဲ့ Midnight Runners ဟာ ကိုရီးယားပြည်တွင်းမှာတော့ အတော်ကို စိတ်ဝင်စားခံခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ရုပ်ရှင်အတွက် လက်မှတ်စောင်ရေ 5.61 သန်း ရောင်းချထားခဲ့ရပြီး ၀င်ငွေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 39 သန်းထိ ရရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက် 12 ခုကိုလည်း ၀င်ရောက်ပြသခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ယခုပဲ ကြည့်လိုက်ကြဖို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
Bae Yoo-ram Byeon Woo-seok Cho joon Go Joon Kang Ha-neul Lee ho-jeong Park Ha-sun Park Seo-joon Sung Dong-il
Option3yuudrive.me 513 MB SD (480p)
Option7yuudrive.me 1.2 GB HD
Option 11 yuudrive.me 2.3 GB FHD AC3 5.1
Option 12 megaup.net 2.3 GB FHD AC3 5.1